Semalt waxay muujinaysaa fikradaha ugu badan ee ku saabsan SEO
In kasta oo caddaynta muhiimadda sii kordheysa ee SEO ay tahay mid qancinaysa,qaar ka mid ah mulkiilayaasha bogga ayaa weli iska ilaaliya isticmaalka SEO si loogu fududeeyo gaadiidka. Si kastaba ha ahaatee, baadhitaano kala duwan ayaa sheegaaya in laba waxyaalood oo muhiim u ah ganacsigawaa in ay leeyihiin joogitaan dabiici ah iyo gaadiidka booqashada.
khabiirkii ugu horreeyay ee Sare Adeegyada Digital, Artem Abgarian ayaa muujinaya fikradaha ugu badan ee la xidhiidha SEO.
Warshadu waxay si degdeg ah u kobcisaa, taas oo keeneysa in cusbooneysiinta algorithm ee soo noqnoqota.Inta ugu badan ee algorithms ah waxay dhacaan maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, isbeddelada intooda badani ma saameynayaan waxqabadka website-kan iyaga oo kaleinta badan waxay ka koobanyihiin wax yar oo yar oo aan lahayn wax saameyn muuqata.
2. Noocyada Murugsan
Qaar ka mid ah dhinacyada SEO-yada waa farsamo aad u fara badan kuwaas oo marmar saameynayanaqshadeynta iyo bogga internetka. In kastoo, shaqooyinka SEO intooda badani waxay diiradda saaraan waxqabadyada suuq-geynta oo adag sida sida helitaanka erayada muhiimka ah, abuuristamaadooyinka ku haboon, qiimeynta kormeerka, iyo qiimeynta taraafikada
3. Waxtar la'aan
Dadku waxay aamminsan yihiin in codsiyada ah ee SEO aysan ka jirinSuuqa sababtoo ah horumarka joogtada ah ee lagu sameeyey algorithms iyo isbedelada kale. Fikradda ma aha mid run ah sida xaddi badan oo taraafikada ahwuxuu ka soo baxaa SEO..Akhrinta daabacaadda SEO ee sida daabacaadda Search Engine wuxuu ka caawiyaa cusbooneysiinta mulkiilayaasha ganacsiga waxayna ka dhigaan inay ogaadaanwaxa weli ku haboon.
Waxay qaadataa wakhti ay ku dhisto darajo iyo sameyso website-kajoogitaanka online taas oo ah xaqiiqda aan la goyn karin. SEO, si kastaba ha ahaatee, waa mid degan, had iyo jeer waxay keenaysaa natiijooyin illaa iyo inta websiteku si buuxda u yahayla fududeeyay
Iyadoo ay sabab u tahay isbedbeddelka SEO, dadku waxay aaminsan yihiin in ay tahay mid aan la isku hallayn karin.Ma jiro xukun toos ah oo ka sarreeya rikoodhka ama baabuurta aan ka duwaneyn PCC. Si kastaba ha noqotee, in la wanaajiyo website-kan ugu sareeya ee suurtogalka ah ee SEO,waxaa jira suurtogalnimada ugu yar ee la kulmi karo dhibaatooyinka.
Helitaanka natiijooyinka ugu fiican waxay u baahan tahay maalgelin lacag ah, waqtiiyo ilo kale. SEO ma ahan bilaash laakiin waa mid ka raqiisan kanaalka kale ee lacagaha lagu iibsado sida PPC, ama iibsiga gaadiidka isticmaalayahababka kale
7. Isbedelada Websaydhka
Runtii waa run in SEO-ku u baahan yahay shirkado si ay u sameeyaan isbedel yarshabakadooda. Mararka qaarkood, waxay qaadan kartaa dhowr jeer, halka kuwa kale, dib u cusbooneysiinayaan bogga oo dhan si wadajir ah u buuxsamosuuragal ah. Mid kasta oo ka mid ah isbeddelada la soo jeediyey ayaa fure u ah in lagu gaaro ujeedooyinka SEO.
Maanta, shirkadaha oo idil ayaa wajahaya muhiimada weyn ee raadintagaadiidka. Macaamiishu waxay isticmaalaan matoorada raadinta si ay u helaan badeecooyinka, adeegyada, iibiyeyaasha, iyo macluumaadka. Iska-dhicinta baahida loo qabo in la dejiyo ganacsiganatiijooyinka raadinta waxay u horseedi karaan gaadiidka gaadiidka ee tartamayaasha si ay saameyn ugu yeelato ganacsiga si xun Source .